musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Buda muSouth Lake Tahoe, unodiwa pakati pevashanyi
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Guta rose reCalifornia rakabudiswa pakati penzvimbo dzekuchengetera uye dutu remoto
Moto waparadza zvimiro zvinosvika mazana mashanu, wakakuvadza vanhu vashanu, uye wapisa anopfuura ma500 maeka, zvinoenderana nedatha kubva kuCal Fire.
Vagari vemuSouth Lake Tahoe vakarairwa kuenda kumabvazuva nhasi.
Vezvemitemo vanochengetedza mapurisa vaienda pasuo nesuo kuti vaone kuti vese vateerera.
Vamwe vanhu zviuru makumi maviri nezvina vatosiya dzimba dzavo munzira huru inobatanidza South Lake Tahoe neSacramento.
Kuburitswa mukati nekukomberedza Guta rakakurumbira reSouth Lake Tahoe muCalfiornia kwakauya apo US Forest Service yakavhara masango ese gumi nematanhatu eCalifornia kuruzhinji mukati memwaka wemoto watove kuumba seimwe yeakaipisisa pakanyorwa.
Vagari veguta rakakurumbira rekushanyira muCalifornia, South Lake Tahoe pamuganhu wenyika neNevada, vakarairwa kuti vaende kumabvazuva nhasi, nemapurisa achienda pasuo nesuo kuti vaone kuti munhu wese arikuteerera kurayirwa kwekubuda, semoto unoparadza wainge wave kuvhara .
Zvinotenderwa zvekubuda mvumo zvakapihwa munzvimbo yekutandarira yeguta re South Lake Tahoe, California seCaldor Fire - imwe yemoto mukuru wemasango makumi maviri uri kupisa muGolden State - yakavharwa. Mifananidzo kubva kuSouth Lake Tahoe yakaratidza mweya unopfungaira, uye mifananidzo kubva kuSierra-at-Tahoe resort 20 mamaira (12km) kumaodzanyemba yakaratidza. vanodzima moto, vachibatsirwa nemazaya echando echiteshi, vachiedza chose kubata inferno.
Vamwe vanhu zviuru makumi maviri nezvina vatosiya dzimba dzavo munzira huru inobatanidza South Lake Tahoe neSacramento. Moto waparadza zvimiro zvinosvika mazana mashanu, wakakuvadza vanhu vashanu, uye wapisa anopfuura ma24,000 maeka, zvinoenderana nedatha kubva kuCal Fire.
ICaldor Moto yaingova ne14% yaive neMuvhuro masikati, uye vanodzima moto muRiverside neSan Diego Counties, kumaodzanyemba kweLos Angeles, vaive vakatarisana nematambudziko akafanana kutora iyo Chaparral Moto pasi pesimba. Dhidhiyo vhidhiyo vhidhiyo yakatorwa mukupera kwesvondo yakaratidza maherikoputa achirasa matangi emvura pamoto, uyo wakakwapurwa kuita chamupupuri chemarimi.
Moto wemoto chiitiko chaicho mu California, kunyangwe vakuru nevasayendisiti vakapomerawo shanduko yemamiriro ekunze nekuwedzera kutsinga nekuwedzera kukomba kwemoto. Vakuru veCalifornia vakapomherwawo nedzimwe nyanzvi - uye aimbova mutungamiri wenyika VaDonald Trump - nekuda kwekutonga masango zvisirizvo.